Nigeria oo qabanaysa shir ammaanka looga hadlayo - BBC News Somali
Nigeria oo qabanaysa shir ammaanka looga hadlayo
14 Maajo 2016
Image caption Ciidammada ammaanka Nigeria ee Maiduguri
Shirkan ammaanka ee ay maanta martigelinayso Nigeria ayaa waxaa looga gol-leeyahay sidii lagu soo afjari lahaa cabsida ka imanaysa kooxda Boko Xaraam, iyadoo ay sii kordhayso astaanta isu soo dhawaanshaha wadashaqeynta milateri ee quwadaha gobolka iyo taageerada caalamka.
Hogaamiyayaasha dalalka dariska la ah Nigeria ee Benin, Cameroon, Chad iyo Niger ayaa lagu casuumay shirkan, iyadoo sidoo kale ay joogaan wufuud ka kala socota Midowga Yurub, Galbeedka Afrika iyo dalalka Bartamaha Afrika.
Shirkan oo ka dhacaya magaalada Abuja ayaa madaxda sarsare ee ajaanibta ah ee ka qeyb galaysa waxaa ka mid ah, Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande, Kuxigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain Philip Hammond.
Dowladda Nigeria ayaa todobaadkan sheegtay in ay si guul ah ku soo afjartay howlgalkeeda milateri, iyadoo sheegtay in wadahallada ay harayn doonaan dardar gelinta wax ka qabashada dhibaatada bini’aadamnimo.
Walaaca Qaramada Midoobay ee Boko Xaraam
Goor sii horraysayna Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu walaac ka muujiyay xiriirka sii kordhaya ee ka dhaxeeya maleeshiyaadka Boko Xaraam iyo kooxda isugu yeerta Dowladda Islaamka, xilli Nigeria ay maanta martigalinayso shir ku saabsan sida loola dagaalami karo xagjirnimada.
Image caption Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay
Bayaan ka soo baxay Golaha Ammaanka ayaa lagu sheegay in Boko Xaraam ay sii waddo waxyeelaynta nabadda iyo deganaanshaha Galbeedka iyo Bartamaha Afrika.
Kooxda hubeysan ee Nigeria ayaa sanadkii hore ku dhawaaqday inay daacad u tahay kooxda IS, waxaana lagu soo warramayaa in ay Liibiya u dirto dagaalyahanno ku biira kooxdaasi.
Hasayeeshee heerka xiriirka ka dhaxeeya labada kooxood ayaanan la ogeyn.
Boko Haram ayaa shaxda caalamiga ah ee Argagixisada ee ugu dambaysay lagu magacaabay in ay tahay kooxda gaysatay dilkii ugu badan caalamka 2014. Iyadoo qiyaastii 20 kun oo qof dishay tan iyo 2009.